Topimaso - Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
Expo momba ny varotra iraisam-pirenena Florida
16 - 18 martsa 2021 | Virtual
Kitiho ETO HAHAFANTATRA NY PLATFORM VIRTUAL
Mitety ny Expo Iraisam-pirenena any Florida
Mijere fampianarana video fohy hahafantarana bebe kokoa momba ny sehatra hetsika virtoaly sy ny fomba ifandraisanao amin'ireo mpampiranty.
Dikan-teny fandikan-teny anglisy
Dikan-teny fandikan-teny Espaniola
Fampirantiana virtoaly marobe amin'ny sehatra maro an'i Florida
Vokatra mitarika ary
Enterprise Florida, Inc. (EFI), ny masoivoho ofisialy fampandrosoana ara-toekarena sy ara-barotra ho an'ny State of Florida, dia faly nanolotra ny Florida International Trade Expo voalohany, fampirantiana virtoaly 150+ an'ny mpanome tolotra sy serivisy an'ny fanjakana.
Iza no tokony hanatrika?
Agents, mpaninjara, mpividy, solontena ary mpivarotra ambongadiny mitady vokatra avo lenta hozaraina sy amidy any Eropa, Amerika Latina ary Karaiba, Kanada, Mexico, Afrika, Azia ary Moyen Orient.
Manome fotoana virtoaly tsy manam-petra ny Expo!
Mifandraisa amin'ny florida Exhibitors
Alamino ny fivoriana virtoaly
Tambajotra miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Indostria
jereo ny atiny media mivantana
Mampifandray anao amin'ireo mpanapa-kevitra any Florida avy amin'ny indostria maro karazana.
Ny sehatry ny indostria dia mety misy, fa tsy ferana amin'ny:
Entana ny mpanjifa
Fampianarana sy fiofanana
Afo sy fiarovana
Vokatra amin'ny sakafo
Fitaovana sy kojakoja indostrialy
Tsy nahatratra ny hetsika mivantana? Misokatra ho an'ny mpitsidika izao ny sehatra virtoaly.
Efa voarakitra an-tsoratra?
Event Platform dia misy hetsika mandritra ny 30 andro.
Ity hetsika ity dia tohanan'i:
karazana verinia floridaexpo@enterpriseflorida.com raha manana fanontaniana momba ny fandraisana anjara sy ny fisoratana anarana amin'ny Florida International Trade Expo ianao.
© 2022 Florida International Trade Expo. Namboarina maimaim-poana amin'ny fampiasana WordPress sy humming-vorona